Tijaabooyinka waxay ku yimaadaan muuqaalo iyo qiyaaso kala duwan. Waqtigii hore, cilmi baarayaashu waxay arkeen inay ku caawiso samaynta tijaabooyinka iyadoo la raacayo marxalado tijaabo ah oo tijaabo ah iyo tijaabo goobeed . Hadda, si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waa inay sidoo kale qaban-qaabiyaan tijaabooyinka iyagoo raacaya marxaladda labaad ee ka dhexeeya tijaabooyinka analogga ah iyo tijaabooyinka casriga ah . Meelahan naqshaddan laba-cabbir ayaa kaa caawin doonta inaad fahamto xoogga iyo daciifnimada habab kala duwan oo muujinaya meelaha fursadaha ugu weyn (Jaantuska 4.1).
Jaantuska 4.1: Muujin meel bannaan oo loogu talagalay tijaabooyinka. Waqtigii hore, tijaabooyinku way kala duwanyihiin marka la eego cabbirka shaybaarka. Hadda, waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin cabbirka analog-ga digital. Meelahan naqshadeynta laba-cabbir waxaa lagu muujiyay afar tijaabo oo aan ku sharxay cutubkan. Fikradayda, aagga fursadda ugu weyn waa tijaabooyinka dijitaalka ah.
Mid ka mid ah cabbirada ay kudhisan karto tijaabooyinka waa cabbirka labajibbaaranaha. Imtixaanno badan oo cilmiga bulshada ah waa shaybaarro shaybaar ah oo ardaydu ay ka shaqeeyaan shahaadooyin kala duwan oo shahaadooyin ah. Tijaabadan noocan ah waxay ku badan tahay cilmi-baaris ku saabsan cilmi-nafsi sababtoo ah waxay u sahlaysaa cilmi-baarayaasha in ay abuuraan goobo aad u xakamaysan si ay u gooyaan oo ay tijaabiyaan aragtiyo gaar ah oo ku saabsan dhaqanka bulshada. Dhibaatooyinka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, waxay dareemaan waxoogaa qariib ah oo ku saabsan gogol-celinta xooggan ee ku saabsan dabeecadda aadanaha ee dadka aan caadi ahayn sida fulinta hawlaha aan caadi ahayn ee goobtan aan caadi ahayn. Dareenadaasi waxay keeneen dhaqdhaqaaqa tijaabooyinka goobaha . Dhibaatooyinka gudaha waxay isku daraan naqshad adag oo ah tijaabooyin xakameyn ah oo la kala doortay oo leh kooxo kaqeybgalayaal badan oo kaqeybgalaya hawlo badan oo caadi ah oo ku yaal goobo dabiici ah oo dheeraad ah.
Inkasta oo dadka qaarkiis ay ka fekeraan tijaabooyinka shaybaarka iyo xirfadaha gudaha ah sida hababka tartanka, waxaa ugu fiican in ay ka fekeraan iyaga oo ah mid dhammeystiran, oo leh awoodo kala duwan iyo daciifnimo. Tusaale ahaan, Correll, Benard, and Paik (2007) labaduba isticmaalaan tijaabada shaybaadhka iyo tijaabo goobeed si ay u helaan ilaha "ciqaabta hooyada." Wadanka Mareeykanka, hooyooyinka waxay kasbadaan lacag ka yar dumarka aan carruurta qabin, xitaa marka marka la barbardhigo haweenka qaba xirfado isku mid ah oo ka shaqeeya shaqooyinka la midka Waxaa jira sharraxaad badan oo suurtagal ah oo ku saabsan qaabkan, mid ka mid ah shaqobixiyeyaashu waxay ka hor imaanayaan hooyooyinka. (Waxaa xiiso leh, ka soo horjeeda waxay u muuqataa in ay runta u tahay aabayaasha: waxay u egtahay in ay kasbadaan wax ka badan kuwa la barbardhigo.) Si loo qiimeeyo loola macaamilo hooyooyinka, Correll iyo asxaabtooda waxay wadeen laba tijaabo: hal mid ah shaybaarka iyo midda beerta.
Marka hore, tijaabada shaybaarku waxay u sheegeen ka qaybgalayaasha, kuwaas oo ahaa kuwa jaamacadda ka hooseeya, in shirkad samaysay shaqo raadin qof si uu u hogaamiyo waaxda cusub ee suuq-galinta ee East Coast. Ardayda ayaa loo sheegay in shirkaddu ay dooneysay caawimaadkooda geeddi-socodka shaqaaleynta, waxaana la weydiistay inay dib-u-eegis ku sameeyaan dhowr musharax oo suurtogal ah iyo in ay ku qiimeeyaan musharaxiinta tiro badan, sida sir doontooda, diirimaad, iyo ballanqaadka shaqada. Dheeraad ah, ardayda waxaa la weydiiyay haddii ay ku talinayaan inay soo kireystaan ​​codsadaha iyo waxa ay ku talinayaan inay noqdaan mushahar bilawga ah. Si kastaba ha ahaatee, ardaydu, si kastaba ha ahaatee, dib-u-dajinta ayaa si khaas ah loo dhisay si isku mid ah marka laga reebo hal wax: qaar ka mid ah waxay muujiyeen hooyonimada (iyaga oo qoraya ka qaybgalka urur waalid-macalin) qaarna ma aysan qaban. Correll iyo saaxiibada waxay ogaadeen in ardaydu ay u badnaayeen in ay ku taliyaan inay soo kireystaan ​​hooyooyinka iyo in ay bixiyaan mushaar hoose oo bilaw ah. Dheeraad ah, iyada oo loo marayo falanqeynta tirakoobka labadaba qiimeynta iyo go'aaminta shaqaalaynta, Correll iyo asxaabtooyu waxay ogaadeen in faa'idooyinka hooyada ay si weyn u sharraxeen xaqiiqda ah in lagu qiimeeyay heerarka kartida iyo ballanqaadka. Sidaa daraadeed, tijaabadan tijaabada ah ee loo yaqaan 'Correll' iyo 'colleagues' si ay u qiyaasaan saameynta nalalka ah iyo bixinta sharaxaad suurtagal ah ee saameyntaas.
Dabcan, waxaa laga yaabaa inay ka shakisan tahay in la soo gebogebo ku saabsan dhammaan suuqa suuqa shaqada ee Maraykanka oo ku salaysan go'aanada boqolaal arday oo ka mid ah kuwa jaamicadaha ah kuwaas oo laga yaabo inaysan waligood shaqeynin waqti buuxa ah, oo cidina kiraystaan. Sidaa daraadeed, Correll iyo asxaabtuba waxay kaloo sameeyeen tijaabin tijaabo ah oo dhamaystiran. Waxay ka jawaabeen boqolaal xayeysiin shaqo oo la xayeysiinayo waraaqo been abuur ah oo dib loo bilaabo. Si la mid ah maaddooyinka lagu muujiyay ardayda ka hooseeya, qaarkood ayaa dib u bilawday hooyonimada oo qaarna ma aysan qaban. Correll iyo saaxiibadood waxay ogaadeen in hooyooyinka aysan u badnayn inay dib ugu yeedhaan waraysiyada marka loo eego dumarka aan carruurta lahayn ee u qalma. Si kale haddii loo dhigo, loo-shaqeeyayaasha dhabta ah ee go'aanka ku salaysan natiijada dabiiciga ah waxay u dhaqmeen sida kuwa yaryar. Miyay go'aanno isku mid ah sameeyaan sabab la mid ah? Nasiib darro, ma naqaano. Cilmi baarayaashu ma awoodeen inay weydiistaan ​​loo-shaqeeyayaasha in ay qiimeeyaan musharrixiinta ama sharaxaan go'aanadooda.
Labadan tijaabadood waxay muujinayaan wax badan oo ku saabsan tijaabooyinka shaybaarka iyo guud ahaanba. Imtixaanka shaybaarka ayaa u fidiya cilmi-baarayaasha ku dhow dhaw si loo ilaaliyo bay'ada ay ka qaybgalayaashu go'aan ka gaarayaan. Sidaa darteed, tusaale ahaan, tijaabada shaybaarka, Correll iyo asxaabtu waxay awoodeen inay hubiyaan in dhammaan dib-u-akhrinta lagu akhriyay meel nabad ah; ee tijaabada goobta, qaar ka mid ah qoraallada ayaa laga yaabaa inaan xitaa la akhrin. Dheeraad ah, sababta oo ah ka qaybgalayaasha shaybaarku waxay og yihiin in la baranayo, cilmi-baarayaashu inta badan waxay awoodaan inay ururiyaan xog dheeri ah oo kaa caawin kara sharaxaadda sababta ka-qaybgalayaashu ay go'aanadooda u gaadhayaan. Tusaale ahaan, Correll iyo saaxiibadood ayaa waydiistay ka qaybgalayaasha tijaabada shaybaarka si ay u muujiyaan musharrixiinta kala duwan. Noocan ah data-socodka caawin kara cilmi fahmaan hababka ka dambeeya kala duwan sida ka qaybgalayaashu daweeyo resume ah.
Dhinaca kale, sifooyinka kuwan oo isku mid ah ee aan hadda ku sharraxay faa'iidooyinka ayaa sidoo kale mararka qaar loo arkaa faa'iido daro. Cilmi-baadhayaasha kuwa raba tijaabooyinka tijaabada ah waxay ku doodaan in kaqaybgalayaasha tijaabada shaybaadhku ay si aad u duwan u dhaqmi karaan sababtoo ah waxay ogyihiin in la baranayo. Tusaale ahaan, tijaabada shaybaarka, ka qaybgalayaashu waxay yiraahdeen ujeedada cilmi-baarista iyo bedelidda habdhaqankooda si aanay u muuqan mid khiyaano leh. Intaa waxa dheer, cilmi-baarayaasha raba in ay tijaabiyaan tijaabooyinka laga yaabo inay ku doodaan in farqiga yar ee dib-u-dejinta ay ku istaagi karaan jawi aad u nadiif ah oo nadiif ah, sidaa daraadeed tijaabada shaybaarka ayaa kor u qaadi doona saameynta hooyanimada ee go'aannada shaqaaleynta dhabta ah. Ugu dambeyntii, taageerayaal badan oo tijaabooyin ah ayaa cambaareeya tijaabooyinka shaybaarada 'ku tiirsanaanta' tijaabo-qaadayaasha ka-qaybgalayaasha WEIRD: inta badan ardayda ka soo jeeda Galbeedka, Waxbarashada, Horumarinta, Richest, iyo Demoqraadiyada (Henrich, Heine, and Norenzayan 2010a) . Dhibaatooyinka saxda ah ee Correll iyo asxaabta (2007) muujinaya labada xagalood ee ku yaala duruufaha shaybaadhka. Inta udhaxaysa labadan xagood waxaa kale oo jira qaabab kala duwan oo isku dhafan, oo ay ka mid yihiin wajiyada sida ardayga aan ardayga u gelin shaybaar ama u galaya goobta laakiin weli ka qaybgalayaashu waxay qabtaan hawl aan caadi aheyn.
Marka laga soo tago cabbirka shaybaarka ee hore u jiray, da'da dijitaalka micnaheedu waa in cilmi-baarayaashu ay hadda leeyihiin cabbir labaad oo weyn oo ay tijaabooyin kala duwan yihiin: analog-digital. Sidoo kale waxaa jira tijaabo tijaabo ah oo tijaabo ah, tijaabooyin saafi ah, iyo noocyo kala duwan oo dhexda u dhexeeya, waxaa jira tijaabo siman oo siman, tijaabooyin tijaabo ah oo cad, iyo noocyo kala duwan. Waa wax aad u adag in la bixiyo qeexitaan rasmi ah ee cabbirkan, laakiin qeexidda shaqo ee waxtar leh waa in tijaabooyinka si dhammaystiran loo tijaabiyo ay yihiin tijaabooyin isticmaalaya kaabayaasha digital si ay u qortaan ka qaybgalayaasha, kala soocaan, u bixiyaan daaweynta, iyo cabiraan natiijooyinka. Tusaale ahaan, Restivo iyo van de Rijt (2012) ee barnstars iyo Wikipedia waxay ahayd tijaabo dhamaystiran oo digital ah sababtoo ah waxay isticmaalaysay nidaamyo dijital ah dhammaan afarta tallaabooyinkan. Sidoo kale, tijaabooyinka si buuxda ee analog ma isticmaalaan kaabayaasha digital-ka ah mid ka mid ah afarta talaabo. Qaar badan oo ka mid ah tijaabooyinka caadiga ah ee cilminafsiga ayaa ah tijaabo si buuxda u siman. Inta udhaxeysa labadan xagal, waxaa jira tijaabo cilmi ah oo tijaabo ah oo isticmaala isku-dhafan nidaamyada analog iyo digital.
Marka dadka qaar ka fekeraan tijaabooyinka digital, waxay isla markiiba ka fekeraan tijaabooyinka internetka. Tani waa nasiib darro sababta oo ah fursadaha aad ku tijaabinayso tijaabooyinka dijitalka ah kaliya ma aha internetka. Cilmi-baadhayaashu waxay tijaabin karaan tijaabooyin tijaabo ah oo qayb ahaan ah iyagoo adeegsanaya qalabka elektarooniga ah ee aduunka oo dhan si ay u bixiyaan daaweyn ama cabiraan natiijooyinka. Tusaale ahaan, cilmi-baarayaashu waxay isticmaali karaan casriga si ay u gaarsiiyaan daaweyn ama dareeyaal ku yaal deegaanka la dhisay si loo cabbiro natiijooyinka. Xaqiiqdii, sidaan ka arki karno cutubkan, cilmi-baarayaashu waxay hore u isticmaaleen mitirada korantada ee guriga si ay u cabbiraan natiijooyinka ku saabsan isticmaalka tamarta ku lug leh 8.5 milyan oo qoys (Allcott 2015) . Maaddaama aaladaha dijitaalka ah ay noqdaan kuwo sii kordhaya noloshooda dadka iyo dareemayaasha waxay isku mid noqdaan jawiga la dhisay, fursadaha ay u leeyihiin inay tijaabiyaan tijaabooyin tijaabo ah oo khuseeya dunida muuqaal ahaan. Si kale haddii loo dhigo, tijaabooyinka dijitalka ah ma aha kaliya tijaabooyinka internetka.
Nidaamyada digital waxay abuuri karaan fursado cusub oo tijaabo ah meel kasta oo ay joogaan joogtada shaybaarka. Tusaale ahaan tijaabada shaybaarka, tusaale ahaan, cilmi baarayaashu waxay isticmaali karaan nidaamyo dhijitaal ah si loo cabbiro cabbirka ugu sarreeya dabeecadaha ka qaybgalayaasha; hal tusaale oo ah nooca noocan ah ee cabirada la hagaajiyay ayaa ah qalab indho-indheyn oo bixiya cabbiraad cad oo joogtada ah ee goobta goobta. Da'da dijitaalka ayaa sidoo kale abuuraya suurtogalnimada in la tijaabiyo tijaabooyinka shaambada sida online-ka ah. Tusaale ahaan, cilmi-baarayaashu waxay si degdeg ah u ansixiyeen Amazon Mechanical Turk (MTurk) si ay u qorto kaqeybgalayaasha tijaabada internetka (sawirka 4.2). MTurk waxay la kulmaan "loo shaqeeyayaasha" kuwaas oo leh hawlo u baahan in la dhameeyo "shaqaale" kuwaas oo doonaya inay dhamaystiraan hawlahaas lacageed. Si kastaba ha ahaatee, suuqyada shaqada ee caadiga ah, si kastaba ha ahaatee, hawlaha ku lug leh waxay u baahan yihiin dhowr daqiiqadood oo keliya si ay u dhammaystiraan, iyo isdhexgalka guud ee u dhaxeeya loo-shaqeeyaha iyo shaqaaluhu waa internetka. Sababtoo ah MTurk moodada qaybaha tijaabooyinka shaybaadhka dhaqameedka-bixinta dadka si ay u dhamaystiraan shaqooyinka aysan u qaban karin bilaash - waxay u muuqdaan kuwo ku habboon noocyada tijaabooyinka qaarkood. Dhab ahaantii, MTurk wuxuu abuuray kaabayaasha maareynta qaybaha kaqeybgalayaasha-qorista iyo bixinta dadka-cilmi-baarayaashu waxay ka faa'iideysteen kaabayaashaas si ay ugu soo galaan marwalba oo kaqeybgalayaasha ah.
Jaantuska 4.2: Waraaqaha la daabacay iyada oo la adeegsanayo macluumaadka laga helo Amazon Mechanical Turk (MTurk). MTurk iyo suuqyada shaqo ee kale ee internetka ayaa u fidiya cilmi-baarayaal si habboon si ay u qortaan ka qaybgalayaasha tijaabooyinka. Waxaa laga soo qaatay Bohannon (2016) .
Nidaamyada digital waxay abuuraan fursado dheeraad ah oo loogu talagalay tijaabooyinka la midka ah. Gaar ahaan, waxay awood u siiyaan cilmi-baarayaasha in ay isku daraan xakamaynta xakamaynta iyo macluumaadka habraaca ee la xidhiidha tijaabooyinka shaybaadhka ee ka qaybgalayaasha kala duwan iyo goobo dabiici ah oo dheeraad ah oo la xiriira tijaabooyinka shaybaadhka. Waxaa intaa dheer, tijaabooyinka dijitaalka ah ee dijitaalka ah ayaa sidoo kale bixiya saddex fursadood oo ku adkaatay tijaabooyinka analogga ah.
Marka hore, halka tijaabooyinka tijaabada ah ee simata iyo boqolleyda ka qaybgalayaashu, tijaabooyinka dijitaalka ah ee moobiilka ah ayaa yeelan kara malaayiin ka qaybgalayaasha. Isbedelkani waa maaddaama qaar ka mid ah tijaabooyinka dijitalka ah ay soo saari karaan xogta qiimaha gaaban eber. Taasi waa, markii cilmi-baarayaashu sameeyeen kaabayaal tijaabo ah, kordhinta tirada ka qaybgalayaasha sida caadiga ah ma kordhin qiimaha. Kordhinta tirada ka qaybgalayaasha by factor of 100 ama ka badan ma aha oo kaliya isbaddal tiro badan ; waa isbeddel tayada ah, sababtoo ah waxay u sahlayaa cilmi-baarayaasha in ay bartaan waxyaabo kala duwan oo tijaabooyin ah (tusaale ahaan, heterogeeriyada waxyeelada daaweynta) iyo in ay fuliyaan naqshado dhammaystiran oo tijaabo ah (tus., tijaabooyin waawayn). Tani waa arrin muhiim ah, waxaan ku soo laaban doonaa dhammaadka cutubka markaan ku deeqo talo ku saabsan abuurista tijaabo ah.
Labaad, halka imtixaanaadka shaybaarada intooda badani ay u adeegsadaan kaqeybgalayaasha sida widget-yada aan kala sooc lahayn, tijaabooyinka dijitaalka ah ayaa badanaa isticmaalaan macluumaadka asalka ah ee ka-qaybgalayaasha ee marxaladda naqshadeynta iyo falanqaynta ee cilmi-baarista. Macluumaadkan asalka ah, oo loo yaqaan ' pre-treatment information' , ayaa badanaa laga helaa tijaabada sayniska sababtoo ah waxay ku socdaan marwalba nidaamyada cabbiraadda (eeg cutubka 2). Tusaale ahaan, cilmi-baaraha Facebook wuxuu leeyahay macluumaad fara badan oo daaweyn ah oo ku saabsan dadka ku jira tijaabada cilmiga dijitaalka ah marka loo eego cilmibaadhaha jaamacadda oo ku saabsan dadka ku jira tijaabada tijaabada ah ee analogga ah. Daaweynta ka hor waxay awood u yeelataa naqshadaynta tijaabinta-sida xayiraad (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) oo lagu bartilmaameedsaday kaqaybgalayaasha (Eckles, Kizilcec, and Bakshy 2016) - iyo falanqayn dheeraad ah oo feejignaan leh - sida qiyaasta heterogaanta ee saameynta daaweynta (Athey and Imbens 2016a) iyo isbedelka (Bloniarz et al. 2016) saxda ah (Bloniarz et al. 2016) .
Saddexaad, halka imtixaanaadka shaybaarada badan iyo tijaabooyinka laga helo ay bixiyaan daaweyn iyo cabiraan natiijooyinka xilliga la jajabiyey, qaar ka mid ah tijaabooyinka dijitaalka ah ayaa dhacaya wakhtiyo badan oo dheer. Tusaale ahaan, dib u eegista Restivo iyo van de Rijt ayaa natiijada la qiyaasay maalin kasta 90 maalmood, iyo mid ka mid ah tijaabooyinka aan kuu sheegi doono waqti dambe ee cutubka (Ferraro, Miranda, and Price 2011) la helay natiijooyin saddex sano ah oo asaas ahaan ah kharashka. Macluumaadka saddexda ah, daaweynta hore, daaweynta dheerta ah iyo xogta natiijada - waxay soo baxaan inta badan marka tijaabooyinku ay ku socdaan marwalba nidaamyada cabbiraadda (fiiri cutubka 2 si aad u badan nidaamyada cabbirka).
Inkasta oo tijaabooyinka sahlan ee dijitaalka ah ay bixiyaan fursado badan, waxay sidoo kale la wadaagaan xoogaa daciif ah labadaba siman simo iyo tijaabooyinka analogga ah. Tusaale ahaan, tijaabooyinka looma isticmaali karo barashada hore, waxayna ku qiyaasaan saameynta daaweynta ee la maareyn karo. Sidoo kale, inkasta oo tijaabooyinku ay yihiin kuwo waxtar u leh in ay hagaan siyaasadda, hagaha dhabta ah ee ay bixin karaan waa mid xadidan sababtoo ah dhibaatooyinka sida ku-tiirsanaanta deegaanka, dhibaatooyinka u hoggaansamida, iyo saamaynta sinaanta (Banerjee and Duflo 2009; Deaton 2010) . Dhibaatooyinka goobaha digitalka ah ayaa sidoo kale sii waynaanaya welwelka anshaxeed ee ay sameeyeen tijaabooyinka gudaha-mowduucaan waxaan wax ka qaban doonaa cutubkan iyo cutubka 6aad.